Online ပေါ်ကနေ ငွေအလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ နန်းသူဇ - Cele Platform
Online ပေါ်ကနေ ငွေအလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ နန်းသူဇ
နန်းသူဇာကတော့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ မော်ဒယ်တစ်ရောက်အနေနဲ့သာမက အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း တေးသီချင်းတွေကိုသီဆိုပြီး အောင်မြင်မှုပိုမိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
နန်းသူဇာဟာ အဆိုတော် ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အချစ်ရေးကိုပရိသတ်တွေရှေ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်မှုအပြည့်အ၀နဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ချစ်စရာအတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့Idol Couple အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ အတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်နေတာလည်း အမှန်ပါပဲနော်။
လတ်တလောမှာတော့ နန်းသူဇာဟာ Online ပေါ်ကနေ ငွေအလိမ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး “ပါသွားတာ ပိုက်ဆံ ၁၆၀၀၀ ဆိုပေမယ့်လည်း လိမ်တာက လိမ်တာပဲ။အလိမ်ခံဖူးတာပေါ့လေ။iTune Gift Card လေး အမြန်လိုလို့ မှာကြည့်တာ ပိုက်ဆံလည်း လွှဲပြီးရော ဘာမှကို ပြန်မပြောတော့တာ တစ်ညတော့ စောင့်လိုက်ပါတယ်။
အခြေနေသိချင်လို့လဲ Message လေးလည်း ပို့ပါတယ်။ PUBG အတွက်တောင် သူ့ဆီက UC ဝယ်ဦးမလို့ မေးလိုက်သေးတယ်။ No Reply။ အဲဒါနဲ့ ဒီနေ့ မနက်3hours ago ဆိုတဲ့ Post လေး အောက်မှာ ” ငွေလွှဲပြီး Reply မလာဘူးနော်” လို့ သိအောင်ရေးလိုက်ပါတယ်။
မြင်ရင် တောင်းပန်ပြီး Reply လေးလာမလားလို့ပေါ့။No ပါ။ ကိုယ့်ကို Page က နေ Ban လိုက်တယ်။ကိုယ့် Comment လည်း ဖျက်လိုက်တယ်။သူ့ကို KBZ Pay နဲ့ ငွေလွှဲတဲ့ Phone ကို ဆက်တော့လည်း စက်ပိတ်ထားတယ်။ ( Video) ကဲ 16000 အလှူလေးပါ။Page လေး နဲ့ Screenshots လေးတွေ ကြည့်ကြပါနော်။
နောက်ဆို ရှောင်လို့ရအောင်”ဆိုပြီး သူမလို တခြားသူတွေအလိမ်မခံရစေဖို့အတွက် သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးကြီးထဲမှာရော onlineပေါ်ကနေ ငွေအလိမ်ခံရဖူးတဲ့သူတွေရှိကြလား…. Source : Nann Thu zar ; Credit – CeleGabar
နနျးသူဇာကတော့ မျောဒယျသရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာလောကမှာ ရပျတညျနတေဲ့ သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာတော့ မျောဒယျတဈရောကျအနနေဲ့သာမက အဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့လညျး တေးသီခငျြးတှကေိုသီဆိုပွီး အောငျမွငျမှုပိုမိုရရှိထားတာပဲဖွဈပါတယျ
နနျးသူဇာဟာ အဆိုတျော ကြျောထှဋျဆှနေဲ့ ခိုငျမာတဲ့ အခဈြရေးကိုပရိသတျတှရှေေ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ခပြွထားတာဖွဈပွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျနားလညျမှုအပွညျ့အဝနဲ့ ရှဆေ့ကျနတေဲ့ ခဈြစရာအတှဲလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတျောတျောမြားမြားရဲ့Idol Couple အဖွဈ သတျမှတျထားခွငျးခံရတဲ့ အတှဲလေးတဈတှဲဖွဈနတောလညျး အမှနျပါပဲနျော။
လတျတလောမှာတော့ နနျးသူဇာဟာ Online ပျေါကနေ ငှအေလိမျခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး “ပါသှားတာ ပိုကျဆံ ၁၆၀၀၀ ဆိုပမေယျ့လညျး လိမျတာက လိမျတာပဲ။အလိမျခံဖူးတာပေါ့လေ။iTune Gift Card လေး အမွနျလိုလို့ မှာကွညျ့တာ ပိုကျဆံလညျး လှဲပွီးရော ဘာမှကို ပွနျမပွောတော့တာ တဈညတော့ စောငျ့လိုကျပါတယျ။
အခွနေသေိခငျြလို့လဲ Message လေးလညျး ပို့ပါတယျ။ PUBG အတှကျတောငျ သူ့ဆီက UC ဝယျဦးမလို့ မေးလိုကျသေးတယျ။ No Reply။ အဲဒါနဲ့ ဒီနေ့ မနကျ3hours ago ဆိုတဲ့ Post လေး အောကျမှာ ” ငှလှေဲပွီး Reply မလာဘူးနျော” လို့ သိအောငျရေးလိုကျပါတယျ။
မွငျရငျ တောငျးပနျပွီး Reply လေးလာမလားလို့ပေါ့။No ပါ။ ကိုယျ့ကို Page က နေ Ban လိုကျတယျ။ကိုယျ့ Comment လညျး ဖကျြလိုကျတယျ။သူ့ကို KBZ Pay နဲ့ ငှလှေဲတဲ့ Phone ကို ဆကျတော့လညျး စကျပိတျထားတယျ။ ( Video) ကဲ 16000 အလှူလေးပါ။Page လေး နဲ့ Screenshots လေးတှေ ကွညျ့ကွပါနျော။
နောကျဆို ရှောငျလို့ရအောငျ”ဆိုပွီး သူမလို တခွားသူတှအေလိမျမခံရစဖေို့အတှကျ သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ဖျောပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။CeleGabar ပရိသတျကွီးကွီးထဲမှာရော onlineပျေါကနေ ငှအေလိမျခံရဖူးတဲ့သူတှရှေိကွလား…. Source : Nann Thu zar ; Credit – CeleGabar
အဖေတူသားဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တဲ့ ခင်လှိုင့် သား နေရဲ